Matio 17 - Ny Baiboly
Matio toko 17
Ny niovan'i Jesoa tarehy - Mbola ho avy Elia - Ilay zazalahy nampahorian'ny demony ka sitrana - Nandoa hetra i Jesoa.
1Rahefa afaka henemana taorian'izany, nalain'i Jesoa Piera sy Jakoba ary Joany rahalahiny, ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra avo. 2Dia niova tarehy teo anatrehany izy; ka ny tavany nampirapiratra tahaka ny masoandro, ny fitafiany tonga fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fahazavana. 3Ary indreo niseho tamin'izy ireo Moizy sy Elia niresaka tamin'i Jesoa. 4Dia niteny Piera nilaza tamin'i Jesoa hoe: Tompo, mahafinaritra ny mitoetra atý; ka raha sitrakao, andeha hanao lay telo atý, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. 5Fa raha mbola niteny izy, dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Ary injao nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe: Ity no Zanako malalako, izay sitrako indrindra: henoy izy. 6Nony nandre izany ny mpianatra, dia lavo niankohoka sy natahotra indrindra. 7Fa nanatona azy Jesoa, dia nanohina azy, ka nanao taminy hoe: Mitsangàna, fa aza matahotra. 8Nony niandrandra izy ireo, dia tsy nahita olona afa-tsy Jesoa irery.
9Ary rahefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy, dia hoy Jesoa nandrara azy ireo: Aza milaza na amin'iza na amin'iza izay vao hitanareo, ambara-pitsangan'ny Zanak'olona amin'ny maty. 10Dia nanontany azy ny mpianany nanao hoe: Ahoana ary no ilazan'ny mpanora-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha Elia? 11Ary namaly izy ka nanao hoe: Tsy maintsy ho avy tokoa Elia, ka hanavao ny zavatra rehetra. 12Nefa lazaiko aminareo fa tonga sahady Elia, fa tsy fantatry ny olona izy, ka nanaovany izay sitraky ny fony. Ary ho tahaka izany koa no hampijaliany ny Zanak'olona. 13Dia fantatry ny mpianatra tamin'izay fa Joany Batista no nolazainy taminy.
14Ary rahefa tonga teo amin'ny vahoaka izy, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindrà fo amin'ny zanako lahy; mararin'ny androbe izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika mianjera any anaty afo, ary matetika koa any anaty rano. 15Nentiko tamin'ny mpianatrao izy, fa tsy nahasitrana azy izy ireo. 16Ary namaly Jesoa nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? mandra-pahoviana no handeferako aminareo? Ento atý amiko izy. 17Dia norahonan'i Jesoa ny demony ka nivoaka, ary sitrana niaraka tamin'izay razazalahy. 18Tamin'izay, dia nanatona an'i Jesoa mangingina ny mpianany ka nanao hoe: Nahoana no tsy naharoaka azy izahay? 19Noho ny tsy fahampian'ny finoanareo, hoy Jesoa taminy. Fa lazaiko marina aminareo, fa raha manam-pinoana hoatra ny voan-tsinapy iray aza hianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindrà erý hianao, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho azonareo hatao. 20Iny karazana iny anefa tsy azo roahina raha tsy amin'ny fivavahana sy amin'ny fifadian-kanina.
21Raha nitety an'i Galilea izy ireo, dia hoy Jesoa taminy: Efa hatolotra eo an-tanan'ny olona ny Zanak'olona, 22ary hovonoina izy, nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nalahelo mafy izy ireo.
23Nony tonga tany Kafarnaoma izy ireo, dia nanatona an'i Piera ny mpamory ny hetra dragma roa, ka nanao hoe: Moa tsy mba mandoa ny dragma roa va ny Mpampianatra anareo? 24Mandoa izy, hoy Piera. Ary raha niditra tao an-trano izy, dia notsenain'i Jesoa nilazany hoe: Ahoana no hevitrao, ry Simona? Iza moa no angalan'ny mpanjaka etý an-tany hetra sy hajia? ny zanany sa ny olon-kafa? 25Ny olon-kafa, hoy Piera taminy. Raha izany ary, hoy Jesoa, dia afaka ny zanany. 26Kanefa sao mananfitohina azy isika, ka mandehana manjono any amin'ny ranomasina hianao, dia raiso ny hazandrano azonao voalohany, ka sokafy ny vavany, fa hahita vola dragma efatra ao hianao, ka alao, dia aloavy ho ahy sy ho anao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1035 seconds